Gen. Gaafoow: “Midowga Yurub ayaa naga caawinaya dib u dhiska Immigration-ka” – Radio Muqdisho
Gen. Gaafoow: “Midowga Yurub ayaa naga caawinaya dib u dhiska Immigration-ka”
Taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha dalka Gen. Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud ayaa sheegay in Midowga Yurub uu ka taageerayo Soomaaliya dib u dhiska iyo tayaynta arrimaha socdaalka dalka.
Generaal Gaafoow oo socdaal shaqo ku maraya dalka Norway ayaa sheegay in dowlado badan oo Yurub ah ay caawinayaan Soomaaliya si ay u tayayso arrimaha socdaalka waddanka.
“Norway kaliya maaha dalalka aan tagayno, Ingiriiska ayaan tagaynaa, Holand ayaan tagaynaa, Belgium ayaan tagaynaa , intooda waxaan kala hadlaynaa tababarada iyo dhismaha iyo qalabayn lagu sameynayo Immigration-ka” ayuu yiri Generaal Gaafoow.
“Socdaalkeena waxaa qeyb ka ahaa sidii loo heli lahaa dadkii xirfadda iyo awoodda u lahaa ee ka shaqeyn lahaa Immigration-ka” ayuu sii raaciyay.
Xeer-ilaaliyaha Qaranka: “Dhulka dowladdu leedahay waa in la banneeyaa
Minnesota: Wiil Soomaali ah oo la xiray